Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Logistics, Transport အလုပ်အကိုင်များ
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Jobs in Myanmar
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အလုပ် 32 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
ရန်ကုန်၊မန္တလေးရှိမြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများကို Alote Myanmar တွင်ဝင်ရောက်ရှာဖွေလျှောက်ထားလိုက်ပါ။
အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု | Customs Clearance
- သက်ဆိုက်ရာ လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး2နှစ် သို့မဟုတ် 3နှစ် ရှိရမည်။ - Logistics လုပ်ငန်းများတွင် အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည် - Pink Card ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ - English4skills ရသူ Computer Microsoft Word , Excel , Email အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Junior Executive (Export Documentation)
-Standard Operating Procedures နှင့် ကုမ္ပဏီစည်းမျဉ်းများ/ စည်းမျဉ်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ 100% တိကျမှန်ကန်စွာ လိုက်နာ၍ House Bill of Lading/ Liner Bill of Lading & Master AWB & House AWB ထုတ်ပေးခြင်းကို သေချာစေရန်ဆောင်ရွက်ရမည်။ -Shippers/Shipping Lines/Airlines/Agentsစသည်တို့နှင့်ထိရောက်သော ဆက်သွယ်မှု/ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းမှုများဆောင်ရွက်ရမည်။ -ငွေတောင်းခံလွှာနှင့် ငွေပေးချေမှုကဲ့သို့သော လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ ပြင်ဆင်ရန်အတွက် ဘဏ္ဍာရေး၊ အရောင်းဌာနစသည့် ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းေဆာင္ရြက္ရမည္ -Managementမှ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ေတာင္းဆိုသည့္ အျခားလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကိုပါ ထမ္းေဆာင္ရမည္
အကျိုးအမြတ်: Annual Performance ပေါ်မူတည်‌၍ပေးသော Bonusရမည်။
- Computer Microsoft Office,Internet & Email ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - အပြောအဆိုယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ - ရန်ကုန်မြိုအတွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်ရမည်။ - မိမိ Team ကိုဦးစီး၍ လုပ်ငန်းအောင်မြင်တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - Problem Solving Skill ကောင်းမွန်ပြီး၊ Customer complain များကိုဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။ - ရုံးချိန် - တနလ်ာ မှ စနေ (9 am to5pm) - အသက် - ၂၀ နှစ် မှ ၃၅ နှစ် အတွင်း - လစာညှိနှိင်း
- လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - ကုမ္ပဏီမှချမှတ်ထားသော သတ်မှတ်စံနှုန်းပြည့်မှီအောင် ဦးဆောင်နိုင်ရမည်။ - မိမိလက်အောက်ရှိဝန်ထမ်းများအား ကောင်းမွန်စွာခေါင်းဆောင်နိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်စွာချမှတ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Operation Manager၏ တာဝန်များအား ကူညီလုပ်​​ဆောင်​ပေးနိူင်ရမည်။
Operation Assistant (Night Duty) (Male)
- တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ (သို့) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ။ - ညဆိုင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ။ - ကွန်ပြူတာ ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူ။ - အလုပ်ကိုစေ့စပ်သေချာစွာဖြင့် အပင်ပန်းခံနိုင်သူ။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိသူ။ - အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်၍ အလုပ်တာဝန်များကို မည်သည့်အကြောင်းကိစ္စနှင့်မဆို တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်နိုင်သူ။
Marketing Staff( B To B Sale)
Mandala Company is looking for Marketin Staff( B to B sale) .
အကျိုးအမြတ်: Rewad over performance.
- အများနှင့်ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရမည် ။ - ကျောင်းကိစ္စ ကင်းရှင်းရမည် - ဆက်ဆံရေးပြေပြစ် ဖော်ရွေပြီး အသင်းအဖွဲစိတ်ဓါတ် ရှိရမည်။ - မိမိလုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်အပေါ်တွင် စိတ်နှစ်၍ အားထုတ်ကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
M Logistics is looking for Supervisor for Delivery team.
Mandala companies is looking for Delivery staff.
အကျိုးအမြတ်: - လစာ 15,000မှ 17,000 အတွင်း
- Accounting Services. - Update electronic accounting records via excel or accounting software in use. - Responsible for the month-end closing process and produce monthly and quarterly financial reports for management purposes. - Liaising with other departments . - Support the DH and team and Managing & Preparing the required reports as needed - Issuing payment and receipt vouchers, preparing cheques and remitting funds by telegraphic transfer. - Willing to be trained SAP Business One Software. - Must able to work at dynamic work place with multitask.
အကျိုးအမြတ်: - Yearly Bonus - Yearly increment - Overtime Payment
ဖုန်းဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ | Call Center, Telephone Operator
-Must be able to handling customer complains -Maintainingapositive, empathetic and professional attitude toward customers at all times. -Ensure customer satisfaction and provide professional customer support. - Telephone answering - using software - data entry
အကျိုးအမြတ်: Salary + Bonus and depending on company's policy
- Google Map ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတက်ရမည်။ - Delivery လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ - ရိုးသားကြိုးစားပြီး ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ - အထက်လူကြီးမှ ပေးအပ်သောတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ရမည်။
စက်ရုံတွင်းရှိ မတူညီသောနေရာများသို့ ပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်ရန် reach truckများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ Warehouse itemများ loading , uploadingတွက်တာဝန်ယူခြင်း။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ထိရောက်မှုရှိစေရန်အတွက် စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ လက်လှမ်းမှီသောကုန်တင်ကားအခြေအနေကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပြီးစက်အခြေအနေကောင်းမွန်ကြောင်းသေချာစေရန်တာဝန်ယူခြင်း။ ဘေးကင်းမှု၊ အရည်အသွေးနှင့် အိမ်သန့်ရှင်းရေးစံနှုန်းများကို လိုက်နာရန် တာဝန်ယူခြင်း။ စစ်ဆင်ရေးရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန် အခြားအဖွဲ့၀င်များနှင့် ညှိနှိုင်းခြင်း။
အကျိုးအမြတ်: Over time ကြေးရှိသည်။
- အပြောအဆိုယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ - ရန်ကုန်မြိုအတွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်ရမည်။ - Customer ကို အကောင်းမွန်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရမည် - Problem Solving Skill ကောင်းမွန်ရမည်။ - ရုံးချိန် - တနလ်ာ မှ စနေ (9 am to5pm) - အသက် - ၂၀ နှစ် မှ ၃၀ နှစ် အတွင်း - လစာညှိနှိင်း
တင်သောနေ့: 23 Oct 2021
- ရန်ကုန်မြိုတွင်း ကျွမ်းကျင်စွာ သွားလာမောင်းနှင်နိုင်ရမည်။ - ရုံးချိန် - တနလ်ာ မှ စနေ (9 am -5pm) - အသက် - ၂၀ နှစ် မှ ၃၅ နှစ် အတွင်း